Amacandelo amahlanu ajongene nemarike yemasheya kwi-2019 | Ezezimali
Esinye sezitshixo sokwenza utyalomali lube nenzuzo kulo nyaka kukuvelisa ukhetho olululo kwicandelo lokhuseleko. Ngale ndlela, umahluko phakathi komnye nomnye unokufikelela kwi umahluko ukuya kuma-50%. Ke ngoko, kuya kubaluleka ukuba singazenzi iimpazamo ekusebenziseni esi sicwangciso-nkqubo sisasazeke phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngokukodwa kunyaka onokuba nzima kakhulu kwiimarike ze-equity kwaye ngakumbi uninzi lokungazinzi kumaxabiso ezindululo zeemarike zentengiso.
Ukuba ufuna ukwandisa utyalomali lwakho ukusukela ngoku, kuya kufuneka unikele ingqalelo kumacandelo aya kuba yinzuzo kwiinyanga ezizayo. Ewe kunokuxhomekeka ekubeni ingxelo yakho yengeniso yenye okanye enye ekupheleni konyaka. Ngenxa yale meko ngokubanzi, akukho mathandabuzo ukuba kukho inani lamacandelo emarike yemasheya anokwenza ngcono kakhulu kunamanye. Ngenzuzo ethi kwezinye iimeko ikwazi Yothusa ngaphezu komsebenzisi omnye Iimarike zamasheya. Ukukunceda kule njongo inqwenelekayo, siza kukunika awona macandelo afanelekileyo okutyala imali kwintengiso yemasheya kulo nyaka.
Esi sicwangciso-qhinga sotyalo-mali sijolise kwixesha lesigxina kwixesha elifutshane. Okanye ubuncinci bokugqiba indlela yalo nyaka unzima kakhulu oboniswa kwiimarike zezabelo. Apho ngako konke ukuqiniseka ukuba akusayi kubakho kunqongophala kwamathuba okuthenga okuyinyani ekufuneka ulungiselelwe kuwo ukusukela ngoku. Ngamanye amaxesha, kuya kufuneka ulinde iiveki ezimbalwa ukufumana amaxabiso akhuphisana ngakumbi kunalawo acatshuliweyo ngoku. Ngenxa yeli nyathelo, akukho mathandabuzo ukuba amandla alo okuxabisa aya kuba phezulu kunangoku.
1 Amacandelo engxoweni: Umbane
2 Icandelo lemikhosi
3 Ukujonga eBrazil
4 Icandelo lehotele: iindwendwe ezininzi
5 Icandelo lethelevishini, elinama-nuances
Amacandelo engxoweni: Umbane
Eli candelo leshishini lelo liboniswe yinxalenye elungileyo yabahlalutyi kwiimarike ze-equity ukuze bathathe izikhundla. Kwimeko yakhe ixabiso lokhuselo Ukugqwesa ekujonganeni nesiphithiphithi esinokubakho kwiimarike zezemali. Ayothusi into yokuba kwezi meko, ukusebenza kwayo kubhetele kakhulu kunamanye amacandelo emarike yemasheya. Nangona kunjalo abameli babo abayi kukhokelela ekunyukeni kokunyuka kwezinto kwiimarike zamasheya zamanye amazwe.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba iinkampani zombane zezona zikhokelayo isivuno sesahlulo. Ngembuyekezo yolondolozo enokufikelela kwi-8% ngeli xesha, iphezulu kakhulu kunenzala eveliswe ziimveliso eziphambili zebhanki (iidipozithi zexesha, iiakhawunti zemivuzo ephezulu okanye nasiphi na isicwangciso sokonga). Apho banikezela ngembuyekezo ehlwempuzekileyo kwaye ihlala ingaphantsi kwenqanaba le-1%.
Alithandabuzeki elokuba isenokuba sesona simanga sikhulu kulo nyaka. Nangona kunjalo, unobunzima obukhulu ukuba zimbalwa kakhulu iinkampani zezi mpawu ezidweliswe kwii-equities zesizwe. Kwimeko apho, awunakukhetha ngaphandle kokushiya imida yethu ukwanelisa lo mnqweno wotyalo-mali. Ingakumbi kwi Iimarike zaseMelika Kulapho ke zifumaneka khona ezona nkampani zibalaseleyo kweli candelo lobuchule. Olu khetho luza kubandakanya ukuhlawulwa kweekhomishini eziphezulu kunakwimali yezemali kwilizwekazi elidala. Kodwa ngumrhumo omele ukuwuthatha ukuba into oyifunayo kukunyusa inzuzo yepotifoliyo yakho elandelayo yotyalo-mali. Ukongeza, ukungavisisani okwenzekayo kwezinye iindawo zamanye amazwe kuyanceda ukuxabisa ukuphinda kuhlaziyeke, kwaye kwezinye iimeko ngamandla amakhulu.
Ukufika kuka-Jair Bolsonaro kwi-ofisi kamongameli we-Latin American giant kuxhase ukulingana kweBrazil ngethemba elikhulu. Akunyanzelekanga ukuba uhambise utyalomali lwakho kwelinye icala leAtlantic. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, ungavula izikhundla kwiinkampani ezidweliswe kwi-benchmark index yeSpanish equities, i-Ibex 35, evezwe kwelo lizwe. Umzekelo, I-Telefónica, iBanco Santander okanye iMapfre, phakathi kwezinye ezifanelekileyo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba banokukhetha amaxabiso abo kwimarike yemasheya yaseRio de Janeiro. Imakethi, leyo, ngasendleleni, yenye yezona zinenzuzo enkulu ekuqaleni konyaka. Awunakho ukulibala eli candelo ukwenza ukonga kunenzuzo.
Icandelo lehotele: iindwendwe ezininzi
La imatshi entle yokhenketho Amazwe aphesheya kufuneka azincede ezi nkampani zibe nokuxabisa okungcono kwamaxabiso azo ukusukela ngoku. Ngale ndlela, isigqibo esigqibeleleyo sokuhambisa imali kulondolozo lwamaqela ehotele adweliswe kwiimarike zezabelo. Banokuthatha ithuba lokunyuka kokuhamba kwabakhenkethi kunye nabakhenkethi unyaka wonke. Ukuba olu lukhetho lwakho, kuya kufuneka wazi ukuba zimbini iinkampani ezidweliswe kwimarike yesizwe. Ezi zii-Sol Meliá kunye ne-NH Hoteles, ezinokubaluleka kokuphononongwa ngokutsha, ngakumbi iqela leshishini laseBalearic.
Icandelo lethelevishini, elinama-nuances
Ngaphakathi kweli candelo lezemali kukho ixabiso elinokwenza kakuhle kulo nyaka. Sithetha ngayo NetflixInkampani yaseMelika eyonwabisa ngokubonelela ngesiqulatho semithombo yeendaba kwimfuno engaphezulu kwi-Intanethi. Ingamangalisa kakhulu kwii-equity zamazwe aphesheya kwaye inezinye zezona ndawo ziphambili zohlaziyo kwiimarike zezemali.
Ngayiphi na imeko, yinkampani engadweliswanga kwiimarike zesizwe kwaye kuya kufuneka uye kwimarike yemasheya yaseMelika. Nangona kuwo onke amathuba okuba kukusebenza okukubuyekeza ngokwezimali kwaye unokufumana izibonelelo ezimnandi kwixesha eliphakathi okanye elona xesha libi kwixesha elide. Kwelinye icala, zininzi iinkampani ezinomdla wokuthenga. Umzekelo, iapile kwaye le yinto enokunceda ixabiso layo liqhubeke nokunyuka. Njengoko ikhule kwiinyanga ezidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Amacandelo amahlanu ajongene nemarike yemasheya kwi2019